Safarka Dibadda ee Dalxiiska iyo Suuqa Dalxiiska oo Cirka isku Shareeray 2028
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Safarka Dibadda ee Dalxiiska iyo Suuqa Dalxiiska oo Cirka isku Shareeray 2028
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Kuweyt • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Sucuudiga • Jebinta Wararka Safarka • Jebinta Wararka Imaaraadka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Raaxada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Warshadaha safarka iyo dalxiiska ee wadamada GCC ayaa markhaati ka noqday koror ballaaran sanadihii la soo dhaafay.
Warbixin cusub ayaa baareysa suuqyada dhoofka iyo dalxiiska ee Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar iyo Kuwait,
Suuqa Sacuudi Carabiya waxaa lagu qiyaasay inuu kasbado dakhli dhan $ 27,030.19 milyan sanadka 2028.
Suuqa UAE wuxuu saadaaliyay inuu gaaro $ 30,484.37 million sanadka 2028.
Marka loo eego tirakoobka warshadaha safarka iyo dalxiiska, sanadka 2017, qarashka dalxiis ee caalamiga ah ee qofkiiba ka yimaada wadamada iskaashiga khaliijka (GCC) wuxuu 6.5 jeer ka badan yahay celceliska adduunka.
Dhinaca kale, marka loo eego tirakoobka Bangiga Adduunka, kharashka dalxiis ee caalamiga ah ee Saudi Arabia, Qatar, iyo Kuwait, sanadka 2019 waxaa loo diiwaan galiyay inay yihiin USD 16.415 billion, USD 12.528 billion, iyo USD 17.131 billion siday u kala horreeyaan. Dheeraad ah, kharashaadkan Imaaraatka Carabta (UAE) wuxuu ka koray USD 18.004 bilyan 2018 ilaa USD 33.372 billion 2019.
Warbixinta cusub waxay soo bandhigeysaa qoraal kooban oo ku saabsan safarka dhoofka iyo dalxiiska ee Sacuudiga, Imaaraadka, Qatar, iyo Kuweyt. Warbixinta ayaa diiradda saareysa isbeddellada ugu dambeeyay ee suuqa, fursadaha, wadayaasha koritaanka, iyo xannibaadaha la xiriira kororka suuqa muddada 2019-2028.
Warshadaha safarka iyo dalxiiska ee wadamada GCC ayaa markhaati ka noqday koror ballaaran sanadihii la soo dhaafay. Kobacaani waxaa ugu horeyn loo aaneyn karaa dakhliga sii kordhaya ee shakhsiyaadka quruumahan, oo ay weheliso baahida sii kordheysa ee shakhsiyaadka safarka la xiriira ganacsiyada, firaaqada, ama ujeedooyinka diinta ee dalal kala duwan oo adduunka ah.
Tirokoobyada kale ee ay Baanka Adduunka, Dakhliga guud ee Qaranka (GNI) qofkiiba ee Sacuudiga, Imaaraatka, iyo Qatar wuxuu ka kordhay USD 19,990, USD 39,290, iyo USD 56,920 siday u kala horreeyaan sanadka 2017 illaa USD 22,840, USD 43,470, iyo USD 61,180 siday u kala horreeyaan sanadka 2019. Dheeraad ah, Kuweyt, tani waxay ka korodhay USD 31,400 ee 2017 illaa USD 36,290 ee 2019.
Suuqa GCC ee socdaalka iyo dalxiiska waxaa lagu qiyaasaa inuu ku koro CAGR aad u weyn mudada saadaasha, tusaale, 2021 - 2028. Suuqa kuyaala Sacuudi Carabiya waxaa laguqiyaasayaa inuu kasbado dakhli dhan USD 27,030.19 milyan sanadka 2028, laga bilaabo USD 15,100.83 million in sanadka 2019 iyada oo ku koraysa CAGR ah 18.21% muddada saadaasha. Dheeraad ah, suuqa ku yaal Imaaraadka, oo helay qiime dhan 19,448.49 milyan oo doollar ah sannadka 2019, waxaa la filayaa inuu sii gaaro USD 30,484.37 milyan 2028, iyadoo ku koraysa CAGR 18.73% inta lagu jiro muddada saadaasha. Intaa waxaa sii dheer, safarka dibadda ee dalxiiska iyo dalxiiska Qatar waxaa la saadaalinayaa inuu ku koro CAGR 18.66% muddada saadaasha ah iyo inuu kasbado dakhli dheeraad ah oo ah 3989.34 milyan oo doollar sannadka 2021. Suuqa Kuweyt, dhinaca kale, waxaa la filayaa inuu soo saaro dakhli la taaban karo oo ah USD 17,392.50 milyan 2028, iyadoo ku koraysa CAGR 18.40% mudada saadaasha.
Bartlett wuxuu ku amaanay NCB furitaanka Jawaab celinta Dalxiiska ...
Safarada Hurtigruten waxay soo bandhigaysaa Galapagos gaar ah ...
Boodbood la'aan Ciyaaraha: Tokyo Olympics waxay ka baxaysaa aalkolo la'aan